Fomba fanao maraokana: fivavahana, kolotsaina ary gastronomie | Vaovao momba ny dia
Fomba amam-panao maraokana
Monica sanchez | | Africa, Toerana fitsangatsanganana, Maraoka
Efa naheno zavatra betsaka momba izany isika Maraoka, firenena afrikanina izay tena akaiky an'i Espana. Saingy tsy milaza amintsika zavatra tsara momba azy foana izy ireo, fa zavatra ratsy kosa momba ireo olona niampita ny dobo hitady fiainana tsaratsara kokoa any Eropa. Na dia marina aza fa firenena mbola mandroso ity, ny tena izy dia, toa ny toerana rehetra, manana ny endrika "sariaka" ihany koa izy.
Ary io "tarehy" io no horesahiko ato amin'ity lahatsoratra ity. Be dia be ny zavatra azo jerena sy mahafinaritra eto, amin'ny zoro kely any avaratra andrefan'ny kaontinanta afrikanina. Mianara momba ny fomba amam-panao any Maroc.
I Marôka dia firenena iray misy fiantraikany, mazava ho azy afrikana, fa koa ny Arabo sy Mediteraneana. Manana fomba amam-panao sy fomba amam-panao maro izy izay tokony ho fantatra hahafahantsika mandany fialan-tsasatra nofinofy amin'ity toerana ity. Ary ireto no manaraka:
1 Fanjifana dite
2 Fivavahana, islam
3 Fifandraisana amin'ny olona imasom-bahoaka, voarara
4 Ny kanto fihomehezana
5 Fanjifana zava-pisotro misy alikaola
6 Ny fianakaviana no zava-dehibe indrindra
7 Tsy fahalalam-pomba ny mamela sakafo eo amin'ny loviao
Io no iray amin'ireo fomba amam-panao miorim-paka lalina indrindra. Satria mafana be dia be any Afrika, dia manana dite foana ny maraokana amin'ny fotoana rehetra. Io zava-pisotro io dia zarain'izy ireo amin'ny vahiny, vahiny na mpitsidika fivarotana aza. Izy io koa dia a famantarana fandraisam-bahiny, iray amin'ireo maro 😉. Any Maraoka dia horaisina tsara foana ny vahiny, na dia olona tsy dia mifankahalala aza izany indraindray dia asaina hisakafo ihany koa.
Any Maraoka ny fivavahana lehibe indrindra dia ny Silamo. Manompo andriamanitra, Allah, ary manompo azy isan'andro izy ireo. Raha ny marina dia mivavaka izy ireo 5 fotoana manaraka toetr'andro:
Fajr: fiposahan'ny masoandro alohan'ny fiposahan'ny masoandro.
Asr: folak'andro tolak'andro alohan'ny filentehan'ny masoandro.
Maghrib: lasa alina.
Isha: amin'ny alina.
Miely manerana ny faritany misy moske maro, toy ny Agadir Mosque, izay lehibe indrindra amin'ny rehetra. Ity dia manana tilikambo avo, misy varavarana mahafinaritra sy filigree ao amin'ny rindrina…, saingy indrisy, voarara ny fidirana amin'ireo "tsy mpino". Raha tsy Silamo ianao dia hiditra ao amin'ny Moske Hassan II fotsiny Casablanca, izay fahatelo lehibe indrindra manerantany. Izy io dia natsangana tamin'ny marbra voakilasy, ary manana mozaika tena tsara. Mihoatra ny 200 metatra ny haavon'ny minareta, ka lasa avo indrindra eto an-tany.
Fifandraisana amin'ny olona imasom-bahoaka, voarara
Betsaka ny mifamihina ny tandrefana rehefa manome vaovao tsara ho antsika izy ireo, na dia eny afovoan-dalana aza. Voarara io any Maraoka io. Ny lehilahy ihany no afaka mifampitantana. Ho azy ireo dia a famantarana ny fisakaizana. Tsy azo atao koa ny maneho firaisam-po eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy Silamo.
Ny kanto fihomehezana
Azonao an-tsaina ve ny mandeha miantsena amin'ny fivarotana rehetra eny an-dalambe ary manomboka mihaodihaody? Azo inoana fa tsy hifanaraka amin'ny mpivarotra mihitsy, fa hafa kosa ny any Maraoka: raha tsy miady varotra ny mpanjifa, dia mety horaisin'ilay mpivarotra ho fandikan-dalàna izany. Ho fanampin'izay, mahazatra ny vokatra tsy manana ny vidiny voamarika, ka manomboka mihahaka ny olona.
Amin'ny kolontsaina Arabo dia hetsika ara-tsosialy mahazatra indrindra io; raha ny tena izy dia tsy hita maso tsara fa ny vidin'ny mpivarotra dia ekena eo ankavanan'ny ramanavy, ka lasa tezitra ny mpivarotra. Ny mahazatra dia manolotra vidiny mirary ambany kokoa ary avy amin'izany no ifanarahana amin'ny vidiny mifandanja kokoa mahasoa ny roa tonta.
Fanjifana zava-pisotro misy alikaola
Amin'ny trano fisakafoanana sasany any amin'ny firenena dia avela ny fisotroana alikaola ary alefa zava-pisotro misy alikaola. Na izany aza, tsy ny lalàna ankapobeny izany ary tsy maintsy takatry ny mpitsidika io lafiny io. Tsy voatery hivarotra toaka ny trano fisakafoanana ary tena ratsy ny manararaotra azy io amin'ny làlam-bahoaka na mandeha mamaky ny arabe miaraka amin'ny zava-pisotro fanampiny vitsivitsy. Ilaina ny fanajana mba hankafizanao ny fijanonanao any Maraoka.
Ny fianakaviana no zava-dehibe indrindra
Raha misy zavatra efa nifandimby tamin'ny taranaka nifandimby dia izay ny vehivavy dia tsy maintsy manatona virijiny amin'ny fanambadiana. Voarara ny fifandraisana alohan'ny fanambadiana. Tsy maintsy atao ny fanambadiana, ary ny mpivady rehetra dia tsy maintsy manambady raha tsy te ho tototry ny fiarahamonina.
Ankoatra izany, ny fianakaviana dia Sagrada ho an'ny maraokana dia ny be antitra ary indrindra ny be taona no manana ny teny farany rehefa misy fanapahan-kevitra lehibe raisina.
Tsy fahalalam-pomba ny mamela sakafo eo amin'ny loviao
Betsaka ny sakafo, ka raha sisa tavela eo amin'ny lovia ny sakafo dia tsy misy na inona na inona mitranga. Zavatra mitranga matetika eto amin'ity firenena ity izy io. Ary teny an-dalana, tokony ho fantatrao fa raha mihinana amin'ny tananao ankavia dia tsy dia misy tsiro tena tsara, satria heverin'izy ireo ho fihetsika maloto, satria nentim-paharazana dia mampiasa an'io tanana io izy ireo hanadiovana ny faritra tsy miankina aminy. Na izany aza, tsy tokony hatahotra ianao, satria tsy hampiasa azy io ianao raha misakafo tsy misy ratra.
Fantatrao ve ny iray amin'ireo fomba amam-panao Maraokana? Fantatrao ve ny hafa?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Africa » Maraoka » Fomba amam-panao maraokana
firenena tena mahaliana izy io !! Te-handeha afaka andro vitsivitsy aho ...
Heveriko fa tena tsara tarehy ny kolontsaina any Maroc
Nofinofy i Maraoka, ny mitsidika azy dia nanao in-telo aho: tsy mitovy ny olona manampy, na dia be aza ny picaresque, tsy lafo koa izany, saingy… .hiaina na hiteny dia mbola mitovy amin'ny nananany ihany izy ireo zara raha nivoatra. na eo aza ny zava-drehetra ... tiako i Maraoka.
Mamaly an'i vir
khaoula khaoula dia hoy izy:
Tiako izy, firenena feno kolontsaina ary tiako izany
Mamaly an'i khaoula khaoula
Nanampy betsaka ahy ity pejy ity satria fantatry ny raiko ny fanao any Maroc
Manentana ny tsirairay aho hanome hevitra momba an'i Maraoka sy ny mponina ao aminy, mitsangatsangana farafaharatsiny indray mandeha amin'ny fiainanao any. Manambady marokana iray aho ary manana tovovavy mahafinaritra izahay, efa 7 taona aho no nankany Maraoka ary tafiditra tanteraka amin'ny fianakaviako politika aho, mahafinaritra ry zareo. Raha te hanana fanajana isika dia tokony hanaja ny tenantsika koa. Diso ny momba ireo vehivavy 4…. toy ny habibiana maro be izay novakiako sy henoko. Aza matoky izay rehetra henonao raha tsy izay hitanao, mbola tsy mahalala lehilahy misy vehivavy 4 aho, ary manana fianakaviana maro any aho noho ny vadiko….
Lilliam de Jesús Sánchez dia hoy izy:
Salama Maria, mihaona amin'i Maraoka aho ary tiako ho fantatra bebe kokoa ny fomban'izy ireo, misaotra
Valiny tamin'i Lilliam de Jesús Sánchez
Mirissa, ny toeram-pialofana amin'ny trozona ao Sri Lanka